शीर्ष Ro रोमान्स एनिमे - पालना दृश्य
by Dima XNUM Xth 26 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी शीर्ष Ro रोमान्स एनिमेमा
हामी सबै एनिमेस रोमान्स विधा मन पराउछौं, तर ती सम्झना शृंखलाहरू के हुन् जुन तपाईंले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न? यस ब्लगमा म सबै एनिमेस को विवरण दिनेछु जुन मैले यो श्रेणीको अन्तर्गत आएको देखेको छु, र जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा आफुलाई माया गर्छु। यस सूचीमा केहि छनौटहरू आपत्तिजनक देख्न सकिन्छ त्यसैले हामी यसको लागि क्षमा चाहन्छौं। हामी आशा गर्छौं कि हाम्रा अधिकांश पाठक १ 18 भन्दा माथिका छन् तर यसको बाबजुद हामी अघि बढ्नेछौं। हामीले केही एनिम पनि समावेश गरेका छौं जुन अ d्ग्रेजी डब हुन्छन् र केहि छैन जुन। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं ती सबैमा रमाईलो हुनुहुनेछ।
Ka. काइचौ वा दासी-सामा! (स्वराङ्कित)
"दासी Samma!" बाट लिइएको (JCStaff)
कैचौ वा दासी - सन्मा! मेरो मनपर्ने मध्ये एक हो र यो एकदम यादगार पनि थियो। मलाई धेरै पात्रहरू मन पर्थ्यो र मैले अयुजावा र उसुइ बीचको तनावलाई रमाइलो गरें जुन अन्तमा अन्ततः बाहिर पस्कियो। कथा मेरो विचारमा धेरै सरल छ र यो प्रेममा फस्न सजिलो छ। कथा आयुज्वा र उसुई वरिपरि घुम्छ जब उनीहरू एक अर्काको प्रेममा पर्नको लागि यात्रा शुरू गर्छन्।
आयुजवा एक नोकर्नी क्याफेमा गोप्य रूपमा काम गर्छिन् र एक दिन उसुइ उनको काममा लागी काम गर्दछ, उनी अगाडि उनी धम्की दिन्छिन र भन्छिन कि यदि उनीले उनीलाई सबैलाई बताउन चाहिनन् भने उनले उनको निजी दासी हुनु पर्छ। हामीसँग केही दासी स्यामा हुनेछौं! थिमयुक्त सामग्री हाम्रो YouTube च्यानलमा आउँदैछ, त्यसैले त्यसको लागि अप टु डेट रहनुहोस्।
समग्र मूल्या rating्कन:
K.किमी नी तोडोक
किमी नी टोडोक (उत्पादन आईजी) बाट लिइएको
किमी नी टोडोकको मनको यो विशेष प्रकारको आकर्षण थियो। संगीत, यो कोर्ने तरिका, चरित्र आवाज र यस एनिमेटेड श्रृंखला को अन्य धेरै मौलिक पक्ष मेरो लागि पोइन्ट थियो। कथा सरल छ र मलाई अन्त मनपर्‍यो। यो धेरै नै मीठो र निर्दोष प्रकारको anime हो। यदि तपाईं कुनै पनि कामुक वा busty प्रकारको कार्यको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ किमी नि टोडोक तपाईंको लागि होईन। यो शान्त, लजालु र सुन्दर सावाको कुरुनुमा र उनीको काउतेह्याको सम्बन्धको केन्द्रबिन्दु हो जुन उनीहरू पहिलेको शृ each्खलामा एकअर्काको मित्र बन्छन्, जब उनीहरूले भेट्टाएकी छिमेकी बिरालोमा उनीहरूको चासो देखाए।
सावको सबैको लागि धेरै दयालु छ र सबैलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्दछ, यसले उनको चरित्र धेरै प्रशंसनीय र मनपर्दो बनाउँदछ। यो राम्रो हो किनकि हामी वास्तवमा को लागि थाहा छ हामी को साथ सहानुभूति राख्नु पर्छ।
Sc. मैल इच्छा (डब)
"Scum's Wish" (Lerche) बाट लिइएको
यदि तपाईं गैर-निर्णायक अन्त्यमा हुनुहुन्न भने हामी स्क्यामको इच्छा सुझाव दिँदैनौं। यो किनभने यसको एक धेरै निर्णायक अन्त छैन। कथा एक धेरै निराश र निराशाजनक छ, कुनै चरित्रले अन्तमा उनीहरूले के चाहान्छन् भन्ने कुरा प्राप्त गरेनन् जुन साँचो प्रेम थियो। हनबी यासुराओका र मुगी अवावा एक अर्कालाई माया गर्दैनन्, तर जसलाई उनीहरू गर्छन् उनीहरू पाउँदैनन्। यदि तपाईं स्क्यामको इच्छाको बारेमा अधिक पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो ब्लग पोस्ट पृष्ठमा सम्भावित सीजन २ सम्बन्धी हाम्रो ब्लग जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यस एनिमका धेरै दर्शकहरू भन्छन कि सेक्स दृश्यहरू धेरै यथार्थपरक छन् र मैले आफूलाई केही हदसम्म सहमति जनाएको छु। ती पात्रहरू एक अर्कालाई यौनको रूपमा खोज्ने तरिकामा यथार्थपरक छन्, यदि तपाईले के भन्न खोज्नुभयो भने म। मैले हेर्नुपर्दछ कि यो हेर्नु एकदम कामुक छ, त्यसैले यदि तपाई सजिलैसँग त्यस प्रकारको चीजले अपमानित हुनुभयो भने म सिफारिस गर्दिन, तर जे भए पनि यसलाई जान दिनुहोस्।
ती दुवैले एक अर्कालाई प्रेम गर्दछन् कि ती पूरा हुन्छन्। यो किनभने मुगी आफ्नो संगीत शिक्षकसँग प्रेममा थिए र हनबी पनि उनको शिक्षकसँग मायामा छिन्। यसले समस्या प्रस्तुत गर्दछ, किनकि ती दुबैलाई उनीहरूले चाहेको जो पाएनन्। त्यसोभए, तिनीहरू बाहिर जाने र एक अर्कालाई सेक्स मार्फत समर्थन गर्ने निर्णय गर्छन्। उनीहरूले यसको प्रतिलिपि संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्छन्, र यो यो थियो कि कथा यत्तिको दुःखदायी र आकर्षक भयो। अन्त्य महान हो, तर केहि मानिसहरूलाई यो मनपर्दैन। म तान्न सक्छु कि स्क्यामको इच्छाले मलाई भावनात्मक तवरले उत्प्रेरित गर्‍यो, र म यसलाई हेर्ने सल्लाह दिन्छु। बस तयार हुन।
२. म तपाईंलाई प्रेम गर्छु भन्नुहोस् (डब)
"I I love you" बाट लिइएको (सेन्टाइ फिल्मवर्क)
भन्नुहोस् I Love You धेरै आकर्षक छ किमी नि टोडोकसँग जुन यो कोरिएको छ र देखाइएको छ, जबकि किमी नि टोडोक बढी रंगीन छ। यो उस्तै प्रकारको कथा प्रस्तुत गर्दछ, त्यहाँ एक नर्वस लजालु केटी छ जो वास्तवमा कसैसँग कुरा गर्दैन, लोकप्रिय मान्छे उसलाई फेला पार्छ र उनीसँग कुरा गर्न थाल्छ। कुरा भनेको I I love You को साथ हो कि यसले अन्य उप कथाहरू सेट गर्दछ। फरक चरित्र र कथाले वर्णहरूलाई थप गहिराई दिन्छ।
यो अन्त को एक राम्रो क्रमबद्ध छ र पात्रहरू मनपर्दो र हेर्न सजिलो हो। त्यहाँ एउटा डब छ त्यसैले हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईलाई यो प्रयास गर्नुहोस्। कथा बुझ्न एकदम गाह्रो छैन र यसले पात्रहरूलाई मित्रता र लोकप्रियताको सन्दर्भमा पाठ सिकाउँदछ। यसले एकै समयमा धेरै फरक वर्णहरूको परिप्रेक्ष्य पनि देखाउँदछ, यसले क्यारेक्टरहरूलाई मनपराउन सजिलो बनाउँदछ।
१. क्लेनाड (डब गरिएको)
"Clannad" बाट लिइएको
यदि तपाईं एनिमेस रोमान्स विधाको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले कतै सुरु गर्नुपर्दछ, र हामी तपाईंलाई भन्दछौं कि यदि तपाईंले यो विधामा एनिमेमा देख्नुभएको छैन भने तपाईं क्लेनादबाट सुरु गर्नुहुन्छ। Clannad कथा अद्भुत छ र हामी चरित्र को एक पूरै श्रृंखला बीच एक महाकाव्य प्रेम कहानी देख्छौं। Clannad स्थित छ कि संसार एक multiverse अवधारणा मा काम गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ धेरै वास्तविकताहरू छन् जुन सबै एकै साथ एक साथ चल्दछन्। केही व्यक्तिहरू मल्टिभर्से सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् र त्यहाँ केही प्रमाणहरू छन् जुन यसको अस्तित्व रहेको सुझाव दिन्छ। तपाईं यसको बारेमा अधिक जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यहाँ.
जे भए पनि तोमोया ओकाजाकी र नागीसा फुरुकावा एक अर्काको मायामा छन् र उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि। उनीहरूको सम्बन्धले बाटोमा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, र त्यहाँ पहिलो सत्रमा २odes एपिसोडहरू छन्, दोस्रो सत्रमा २ 25 एपिसोडहरू। यसको मतलव यो लगानीको लागि राम्रो anime हो, र कथा अभ्यस्त जस्तो हुनेछ। Clannad को अन्त यो के यति ग्रिपिंग बनाउँछ के छ, र यो एक वास्तविक दुखद एक हो। Clannad रोमान्स एनिमेस को झण्डा जहाज हो र यो एक तपाईं पक्कै भेट्नुहुनेछ जब तपाईं यसको जस्तै एनिमेको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
हामी जहिले पनि आशा गर्छौं कि यो ब्लग तपाईंलाई सूचित गर्न प्रभावकारी भएको छ जस्तो कि यो गर्नु पर्ने थियो। हामी यस भन्दा समान समान सामग्री पोष्ट गर्ने लक्ष गर्दै छौं र हामी कम्तिमा प्रत्येक हप्ता पोष्ट गर्ने लक्ष्य राख्दै छौं। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले यो ब्लग पढ्न मनपराउनु भयो, र हामी तपाईलाई सबै भन्दा शुभकामना दिन्छौं।
टैग: एनिमे clannad loveanime रोमान्सनिमे रोमान्सनिमेटीवाच sadnaime TOP5 top5 anime top5romanceanime
अघिल्लो प्रविष्टि के अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेरिरहेका छन्?
अर्को प्रविष्टि शीर्ष १० जीवन स्निमेशनमा हेर्न एनिमेसको स्लाइस